के के भयो प्रथम यूरोपस्तरिय महिला सम्मेलनमा ?
मार्च १०, २००९
०९ मार्च पेरिस (सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै डा उपेन्द्र महतो र त्यसपछि मञ्चमा प्रथम एनआरएन केन्द्रिय अध्यक्षका नयाँ उम्मेदवार रामप्रताप थापा,एनआरएन यूरोप महिला प्रतिनिधी उषा शर्मा र जानकी गुरुङ लगायत सहभागीहरु) यूरोपमा रहेका...
एनआरएन केन्द्रिय अध्यक्षमा थापाको उम्मेदवारी घोषणा
मार्च ९, २००९
गैह्र आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामप्रताप थापा (जर्मनी) ले आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको पदमा आफ्नो उम्मेदवारी बिधिवतरुपमा घोषणा गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च ८ का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको प्रथम यूरोप...
हिजो मार्च ८ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। एनआरएन फ्रान्सले पहिलो यूरोप स्तरिय महिला भेला गर्‍यो पेरिसमा । कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न भयो भन्ने आम मानिसहरुको धारणा पाईयो । कार्यक्रम उद्घाटन एनआरएन फ्रान्सको तर्फबाट पेरिस निवासी जगदम्बा अमात्य,एनआरएन...
सँगठीत हुँदैमा महिला स्वतन्त्र हुन्छ र ?
फ्रेब्रवरी २८, २००९
फेब्रुअरी २० तारिखमा ददिराम जी ले यसै ब्लगमा खोइ त महिला जहाँ पनि पुरुषकै बर्चश्व भन्ने लेख लेख्नुभएको थियो । बिषय एकदम राम्रो थियो । मेरो बिचारमा लेख्न खोजिएको बिषयपनि उठाउनै पर्ने बिषय थियो ।...
फ्रेब्रवरी २७, २००९
बिदेशमा बस्ने नेपाली महिलाहरुका समस्या, गुनासा, अप्ठेरा र अवस्था भन्नासाथ हम्रो मानसपटलमा झट्ट याद आउँछ खाडीमा काम गर्ने नेपाली महिलाहरुको । तिनका कठिनाईका बारेमा चर्चा हुन्छ । तिनैका कथा र ब्यथाले स्थान पाउँछन । तर सुन्नु भएको...
खोइ त महिला ? जहाँपनि पुरुषकै बर्चस्व ?
फ्रेब्रवरी २०, २००९
(खोइ त महिला ? जहाँपनि पुरुषकै बर्चस्व ? यो ड्यासमा बस्न लायकको महिला एक जनापनि नभएर हो ?) यो नारी समानता र संलग्नताका गफ धेरै उठ्छन । गरमागरम बहस र छलफलपनि निकै चल्छन । यो उठाउनेपनि...
फ्रेब्रवरी १६, २००९
(जमघटको संझना साँचिराख्ने रहर) बिदेशमा बस्नेका आआफ्नै पीडा छन । बेदना छुट्टा छुट्टै छन । भोगाई फरक छन । देखाईमा भिन्नता हुने नै भए । ति एकले अर्कालाई ब्यक्त नगरेसम्म कसरि बुझ्ने, के गरि थाह पाउने...
जनवरी २८, २००९
यूरोप भरिमा महिलाहरु कति छन ? ति कहाँ कहाँ छन ? के काम गर्छन ? तिनका कठिनाई, दुख, पीडा, बेदना, सजिला र असजिला के के छन ? कसरि महिलाहरु आफ्ना समस्यालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्लान ? यो...
एनआरएन कब्जा गर्ने ल्याए माओवादीले गोप्य नीति
सेप्टेम्बर २१, २००८
-ददि सापकोटा मैले यो थाह पाएको निकै नै भयो । झण्डै चार पाँच महिनानै । तर बल्ल लेख्ने मेसो पर्‍यो । स्पष्ठ भइयो । हो, कुनैबेला माओवादीहरुले यो एनआरएन भन्ने संस्थालाई पानी बाराबर ठान्थे । कतिपयले...
जुलाइ ८, २००८
कार्यक्रममा कोहि सभापति बन्छ । कसैले उद्घोषण गरेर भट्याउँछ। केहि बक्ताहरु बोलाउँछ। बक्ताले मन लागेको भाषण ठोक्छ । अर्को बक्ता आउँछ । उसले अघिल्लोलाई झन माथ गर्ने गरि चर्किएर केहि लामो भाषण ठोकेर जान्छ । कोही गित...